Home News Faahfaahin:-Qarax Xalay ka dhacay Degmada Kaaraan!!
Faahfaahin:-Qarax Xalay ka dhacay Degmada Kaaraan!!
Wararka inaga soo gaaraya Isgoyska Sanca ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in maqribnimadii Xalay uu halkaasi ka dhacay qarax jugtiisa laga maqlay qaar ka tirsan degmooyinka Gobolka Banaadir.
Qaraxan oo nuuciisa uu ahaa Miinada dhulka lagu aaso ayaa waxaa la sheegay bartilmaameedkiisa inuu ahaa Gaari Ciidan oo wadada marayay, balse gaariga markii uu gudbay qaraxa dhacay.
Qaraxan oo ka dhacay meel aan sidaas uga fogeyn Isluulka Godey ayaa waxaa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah oo aanan waxba galabsan.
Dadka degaanka ayaa waxa ay Warbaahinta u sheegeen in qaraxan uu ku geeryooday Hal qof oo shacab ah, tiro kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo loo qaaday Isbitaalada Magaalada Muqdisho.